Ny ray aman-dreny rehetra dia maniry ny zanany ho salama sy salama.
Ny ray aman-dreny rehetra dia maniry ny zanany ho salama sy salama. Ankoatry ny sakafo, ny akanjo sns, ny fanaka izay natory ny zaza kely, ny fipetrahana sy ny filalaovana dia zava-dehibe ihany koa fa hitondra tontolo madio. Ireto misy kofehy vitsivitsy ho anao. Mba hanala ny vovoka matetika fanaka ao amin'ny fanakao, akiso amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Coronavirus (COVID-19) ary mikarakara ny zanakao
Raha manana ankizy iray na roa na mihoatra ianao dia tohizo ny torohevitra momba ny fahasalamam-bahoaka: 1.Tsy afaka miantehitra amin'ny ankizy ianao amin'ny resaka lohahevitra sarotra. noho izany dia mila manolotra ny tenanao ho loharanom-baovao ianao. 2.Mampiasa fampahalalana tsotra sy mahasoa, manandrana hitazona vokatra sy mahomby ny resaka ...Hamaky bebe kokoa »
Raha bevohoka ianao, dia ho azonao antoka fa mahalala ny torohevitra ianao, izay miova tsy tapaka: 1. Ireo vehivavy bevohoka dia nanoro hevitra ny hametra ny fifandraisana sosialy mandritra ny 12 herinandro. Midika izany ny fisorohana ireo fivoriana lehibe, fihaonana miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana na fivoriana any amin'ny toerana ho an'ny besinimaro toa ny kafe, restauran ...Hamaky bebe kokoa »
Coronavirus (COVID-19) sy mikarakara ny zanakao
Fantatray fa fotoana mampientam-po ho an'ny rehetra ity, ary mety manana ahiahy manokana ianao raha bevohoka ianao na manan-janaka. Nametraka ny toro-hevitra momba ny coronavirus (COVID-19) izahay ary mikarakara azy ireo izay misy amin'izao fotoana izao ary hitohy hatrany hatrany raha hanavao izany. Raha ha ianao ...Hamaky bebe kokoa »
Toro-lalana ho an'ny fiarovana ny zanakao ary ho azo antoka rehefa miparitaka ny coronavirus
Fantatray fa fotoana mampientam-po ho an'ny rehetra ity, ary mety manana ahiahy manokana ianao raha bevohoka ianao na manan-janaka. Nametraka ny toro-hevitra momba ny coronavirus (COVID-19) izahay ary mikarakara ireo izay misy ankehitriny ary hitohy hatrany hatrany ...Hamaky bebe kokoa »
Maninona no ilaina ny lalao play a zaza?
Ny ray aman-dreny manana traikefa momba ny zaza dia tokony ho fantatry fa raha ampidiriny am-pandriana ny zanany, dia mety hiahiahy ny ray aman-dreny fa ho voadonan'ny zaza, ka tsy matory alina be ary rehefa matory ilay zaza, noho ny tokan-jaza ara-batana, dia hihomehy sy hitsaina izy indraindray ...Hamaky bebe kokoa »
Ianao ve no nifidy ny totozy kitapo?
Ilaina ve ny famonon-jaza? Samy manana ny fomba fiheviny ny ray aman-dreny tsirairay. Maro ny reny mieritreritra fa ampy ho an'ny zaza sy ny ray aman-dreny miara-matory. Tsy ilaina ny hametraka kapoka zaza. Azo atao koa ny mamelona aorian'izay mifoha amin'ny alina. Ny ampahany hafa tamin’ireo ray aman-dreny dia nahatsapa fa ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana seza ambony seza zaza?
Ny zaza dia ny fanantenana ny fianakaviana, ny zaza nitombo isanandro, ny reny sy ny dadany dia tena mahita maso na ao am-po, manomboka hatrany am-bohoka ka hatramin 'ny zaza, avy amin'ny ronono hamahana ny tenany, mila mikarakara tsara an'i Neny ary i dad, amin'ity dingana ity dia misafidy ny hisakafo seza tsy hita ao amin'ny fandaharana ihany koa, ka ahoana ny hisafidy ...Hamaky bebe kokoa »
2019 Fair + Jugend Fair
Ry rehetra malala, Hanao ny taona 2019 K + J Iraisam-pirenena ho an'ny Tanora izahay mandritra ny Sep 19 ~ 22th, 2019 ao amin'ny Koeln, Alemana. Tongasoa eto amin'ny fitsidihanay (11.3 E-056) sy vokatra vaovao, manantena hahita fotoana bebe kokoa hanompoana anao! Miarahaba ny Faye Living Hamaky bebe kokoa »
Ny ray aman-dreny rehetra dia maniry ny zanany ho salama ...